TomTop kachasị mma na ngwa ama ama Gam akporosis
Anyị na-anọ n'oge ọkọchị ma ọ ga-abụ na ọtụtụ n'ime gị mgbe ị na-ekpori ndụ na ezumike gị ahụla otú ihe oyiyi ndị ị na-ewere si ahapụ ihe dị ukwuu na ịchọrọ ezi ihe ngwọta bụ imeohuru ihe ochie gị ama.
Site na Androisis kwa izu anyị na-ebipụta dị iche iche Amazon na-enye ebe ị nwere ike ịchọta onyinye dị iche iche mgbe ị na-emegharị ekwentị ochie gị. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ imegharị ngwa ochie gị ma ọ bụ zụta ndị ọhụrụ, ị kwesịrị ị na-atụ uche na-enye na TomTop na-eme ka anyị.
1 Sọpụrụ Band
1.1 Honor Band 5 Atụmatụ:
2 Igweisi ekweisi Xiaomi GT1
3 Hohem 3-Axis Gimbal
Quantifying ọla aka abụrụla ihe a na-ahụkarị n'etiti ndị ọrụ chọrọ ịmata ihe ọrụ kwa ụbọchị ha na-eme kwa ụbọchị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha na-agagharị naanị na ha anaghị etinye aka n'ịgba ọsọ ma ọ bụ na-eme ahụ ọ bụla. The Honor Band 5 bụ otu nhọrọ kachasị mma anyị nwere ugbu a n'ahịa ma ụbọchị ole na ole anyị nwere ike ijide ya maka naanị euro 26,99.
Honor Band 5 Atụmatụ:
0,95-anụ ọhịa agba AMOLED ihuenyo.
8 dị iche iche iji hazie ọdịdị ahụ.
Sochie ihe omume ihi ụra.
Ọ na-edekọ ihe omume mgbe anyị na-egwu mmiri.
Zụrụ Honor Band maka euro 29,66
Igweisi ekweisi Xiaomi GT1
Xiaomi na-enye anyị GT1 Obere, ekweisi nwere njikwa mmetụ na bluetooth 5.0, ezigbo maka mmemme egwuregwu yana yana ịkagbu mkpọtụ. Igbe ebe anyị na-echekwa ekweisi na-enye anyị nnwere onwe zuru ụwa ọnụ ruo elekere 12, yana onye nwere onwe ya rue ihe dị ka awa 3,5 kwa na isi na ụgwọ.
Zụta Honor Band GT1 ekweisi maka euro 18,69
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka vidiyo gị pụta dị ka o kwere mee, ihe kachasị mma ị ga - eme bụ ịzụta gimbal. N'ahịa anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ buru ibu n'ime ha, agbanyeghị, ọtụtụ gafere euro 100 ma nye anyị ihe dịka otu uru ahụ dị ka nke ahụ TomTop na-enye anyị naanị euro 58,99.
Zụta Hohem 3-Axis gimbal maka euro 58,99
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » TomTop kachasị mma na ngwa ngwa ama